Zotero, chakanakisa multiplatform bibliographic rejista maneja Linux Vakapindwa muropa
Nguva dzanhasi dzevadzidzi dzakanaka kwazvo ivo vanokwanisa kubata zvese pane yavo laptop, Smartphone, mapiritsi uye zvimwe zvemagetsi midhiya, asi ivo vanoguma vachiongorora mapeji, mafaera ePDF, mifananidzo nezvimwe zvinhu mumafaira akasiyana.
Pakutanga izvi zvaiitwa nekutsvaga mabhuku, magazini, mapepanhau uye zvinyorwa yetisisi yavo yekupedzisira, kazhinji vaipedzisira vaine matani emakopi, mabhuku, uye manotsi akanyorwa nemaoko patafura yavo.
Hazvisi nyore kuenda kuburikidza neaya maforodha pese paunoda kutsvaga musoro wenyaya kana kutora bhuku kana munhu mune yako yekupedzisira mushumo.
Ndokusaka Nhasi tichataura nezvemahara software inonzi Zotero inoita kuti hupenyu huve nyore nekukupa iwe chishandiso chekugadzirisa zvese zvaunounganidza (mabhuku, magazini, zvinyorwa, nezvimwewo) pamwe nekwanisi yekuwedzera metadata pane chimwe nechimwe chezvinyorwa izvi, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti utsvage gare gare.
1 Nezve Zotero
2 Maitiro ekuisa Zotero pane Linux?
Iyi yemahara, yakavhurika uye yemahara bhibliographic rembisiti maneja wakagadziriswa neCent for History uye New Media kuGeorge Mason University iyo inoshandawo sevhisi.
Iyo chirongwa cheplllatform, ichiwanika yeWindows, Mac OS X uye GNU / Linux masisitimu anoshanda.
Zotero inouya seWindows, Mac OS, kana Linux application. Inopawo webhu saiti yekuwedzera yeGoogle Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, uye Opera.
Uchishandisa izvo zvinowedzera, mushandisi anogona kuturikira, kuchengetedza uye kuwedzera akazara mapeji ewebhu kuraibhurari yake muZotero.
Uchishandisa vashanduri vakavakirwa-mukati, zvirimo mumapeji ewebhu uye dhatabhesi zvinogona kududzirwa zviri nyore.
Zotero haisi kungoshandura chete, asi zvakare inowana semantic metadata inoenderana nesaiti. Mafaira ePDF anotorwawo, ayo akasungirirwa papeji.
Chinhu chakakosha kwazvo muchirongwa kugona kugadzira bhuku rezvinyorwa zvichibva pazvinhu zvinevaridzi uye nekugadzira zvinyorwa.
Aya mazwi kana kudonongodzwa kune zvine hunyanzvi mareferenzi ekuti anyore mune yako tsananguro, semuenzaniso, zita rebhuku, munyori, mapeji enhamba, gore rezvinyorwa, muparidzi, nezvimwe.
Zvese zvaunounganidza zvinowedzerwa kuraibhurari yeZotero uye unogona kuwedzera metadata kune zvese zvinhu.
Iwe unogona kutokamura zvinhu zvakaunganidzwa muzvikamu zvakasiyana, semuenzaniso, zvinyorwa, mitsara, zvichemo zvekupedzisira, nezvimwe
Pakati pehunhu hwayo hukuru izvo Tinogona kusimbisa kubva pane ichi chishandiso, tinowana zvinotevera:
Kuumbwa: Zotero inounganidza ruzivo uye riwedzere kune dhatabhesi otomatiki nekutora munhu kana akawanda kubva pane metadata yekuverenga mashini.
Kubva kuDII, ISBN kana manyore kuzadza munzvimbo dzakawanda dzinodiwa kuti ugone kudoma zvakanaka zvinyorwa zvebhaibheri.
Sangano: Nezviwanikwa zvakawedzerwa kuraibhurari, iko kunyorera kunotipa zvinhu zvina zvinoshanda pakuronga izvi: kuunganidzwa, ma tag, zvinhu zvine chekuita nekutsvaga kwakachengetedzwa.
Quote: Zotero inogona zvakare kushandiswa pakunyora zvinyorwa, kutsvagisa, sezvo ichibvumidza kududza zvinyorwa zvebibliographic mukati mechinyorwa, pamwe nekugadzira mareferenzi ebhaibheri uye mabhiiographies anenge otomatiki nekubatanidza neanogadzira mazwi.
Sync kumusoro: Izvo zvinokwanisika kugadzira yemahara mushandisi account, nenzira iyi zvese zvaunochengeta zvinochengetwa pakombuta yako uye zvakare pane yako server. Inokutendera kuti uenzanise raibhurari yezvinongedzo, zvinyorwa uye zvakanamatira.
Kubatana: Iyo inobvumidza kuve neraibhurari pane iri kure server uye, iine mushandisi account, ichipa mamwe mabasa ehukama senge sekugovana kuunganidzwa (vanogona kuve veveruzhinji kana kungobvumidzwa kune boka revashandisi. Mapoka ekubatana anogona kugadzirwa uye kuunganidzwa kwakagovaniswa.
Maitiro ekuisa Zotero pane Linux?
Kune avo vanofarira kugona kuwana iyi kunyorera, vanogona kuzviita kubva kune webhusaiti webhusaiti. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Pane saiti iwe unowana vanoisa iwo ekushandisa, pamwe nekuwedzera kwayo kuti ugone kushandiswa muwebhu browser yako.
Kamwe kurodha pasi kwaitwa, ingo fambisa dhairekitori rakatorwa ku / opt / zotero uye unomhanya set_launcher_iconscript kugadzirisa iyo .desktop faira renzvimbo iyoyo uye yekufananidza chinongedzo.
Kune vashandisi veArch, vanogona kuwana iko kunyorera muAUR repositories.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Zotero, chakanakisa chemuchinjika-chikuva bhaibheri rinotungamira maneja
Rumwe ruzivo nezve iyo Zotero Standalone kuisirwa inoramba ichipihwa.
Ichi chinyorwa chandakanyora muColaboratorio.net
Zotero, bibliographic mareferensi maneja - Zvita 25, 2016
Uye ichi ndicho changu chazvino gwara
Yakazara gwara Zotero - 3rd edition 2018
Kuisa Zotero Standalone paUbuntu uye zvigadzirwa mugwara:
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa / smathot / cogscin
sudo apt-tora kuisa zotero-yakamira
inobatsira zvikuru chinyorwa pamwepo netsananguro yadzo yekuwedzera; Ndiri kutsvaga iri nyore gwaro maneja, yekushandisa wega:
- zvese zviri kumafaira andinotora uye neavo vandakachengeta,
(- zvakare zvinongedzo kubva pamapeji ewebhu)
- Ndinoda kumaka uye kuwedzera tsananguro inondibatsira kuzvitsvaga,
- kukwanisa kusarudza maforodha ayo akachengetwa imwe neimwe, kwete kuti iwo ese anoenda kune imwechete dhairekitori, uye
- kukwanisa kuishandisa usingabatanidzwe kune internet.
Zotero inoenderana nazvo here? Iyo inogona kushandiswa isina kubatana neinternet?
Pane chero imwe yeayo iwe aunokurudzira kundibatsira?